IMF oo shaacisay in dhaqaalaha Somalia u sare u kacay 3.7 % – Kismaayo24 News Agency
IMF oo shaacisay in dhaqaalaha Somalia u sare u kacay 3.7 %
by admin 12th August 2016 069
Soomaaliya ayaa mudateysatay in ay hey’adda IMF iyo kuwo kale ee caalamka oo amaahda bixiya ay tageeraan, kadib markii isbedel lagu sameeyay hanaanka maaliyadda dalka isla markaana la sameeyay mashaariic dib loogu dhisayo wadanka Soomaaliya, sidaa waxaa sheegay mas’uul ka tirsan heyadda lacagta aduunka IMF.
Barwaaqo iyo nabadda ayaa ka soo bidhaameysa Soomaaliya kadib in ka badan 20 sano oo rabshado iyo dagaalo sokeeye ay ka dhacayeen Soomaaliya markii dhowaan dalku go’aansaday in 30 Oct uu doorto madaxweyne cusub, Samba Thiam kamid ah hey’adda IMF oo Email kula hadlay khubaro Soomaaliya kala shaqeysa dib u soo kabashada dhaqaalaha ayaa sidaa sheegay.
“Horumarka ilaa iyo hadda la sameeyay ayaa waxaa kamid ah sharciga maalgashiga, sharciga dejinta heshiisyada, qaabeynta maaliyadda guud ee wadanka iyo sharciga ka hortagga lacagaha la been abuuro,” ayuu yiri Thiam. “ Hadii qorshahan dowladdu sidaas ay u dhaqan galaan Soomaaliya waxaa ay IMF ka caawin doontaa galaangalka dhanka maaliyadda.
Hey’adda IMF iyo Bankiga aduunka (World Bank) ayaa Soomaaliya ka gacansiiya isbedelada lagu sameynaayo qeybaha kala duwan ee ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka kaas oo soo jeedasho leh ,” ayuu yiri Thiam. Wadamada daneeya Soomaaliya Waxaa ay ku bixiyeen lacag dhan $10 million oo lagu horumarinyay xirfadaha.
IMF ayaa sidoo kale, qorsheysay in Bankiga dhexe ee dalka ka caawiso in uu soo daabaco lacago cusub sanadka 2017 , Bankigu waxaa uu hadda ku jiraa wajigii ugu dambeeyay oo deeqbixiyeyaasha ku hubineyaan sida isbedelka lagu sameeyay uu u noqday mid lagu kalsoonaan karo, sidaa waxaa sheegay guddoomiyaha Bankiga Bashir Ciise Cali.
Dhaqaalaha Soomaaliya waxaa uu kordheyaa 3.7 % sanadkan iyo kii la soo dhaafay, qiimeyn ay sameysay hey’ada IMF waxaa ay ku sheegtay in dhaqaalaha uu sii kordhi doono haddii la adkeeyo amniga lana xoojiyo dowladnimada isla markaana wax soo saarka beeraha xooga la saaro, sidaas waxaa sheegay guddoomiyaha Bankiga dhexe ee dalka.
“Hanaanka siyaasadda dalka waa mid socda oo qof kastana saameyn wanaagsan ku leh,” yuu yiri guddoomiyaha. “ Dhibaatadeena ma ahan dhaqaale la’aan ee waa nabadda.”
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in wax soo saarka shidaalka iyo gaas uu bilaaban doono sanadkan 2020 kadib sahmintii lagu sameeyay oo muujisay baaxadda kheyraadkaas.
Hey’adaha dowaliga iyo baarlamaan wax tar leh isla markaana awood u leh in ay galaan wada xaajood heshiis oo ku saabsan gaaska iyo shidaalka kale ayaa ahmiyad weyn u leh Soomaaliya ka hor inta aan la soo saarin ogolaanshaha ayuu mar kale yiri Thiam.
“Sharciyo aan mad madow ku jirin, ayaan taageerada beesha caalamka u aragnaa in ay tahay mid xiiso u leh wax soo saarta gaaska iyo shidaalka kadib doorashada,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagebeeyay.
Madaxweyne Kuxigeenka Ahlusunna oo shil gaari ku dhawacmay
Jamhuuriga oo loogu baaqay in aysan maalgalinin ol’olaha Trump
XOG+Fadeexo: Maxay tahay Sababta Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo u baajiyay Banaanbixii Maanta ka dhici lahaa Muqdisho???
Tifaftiraha K24 26th December 2016
Swedish businessman calls for global investment in Jubaland
Tifaftiraha K24 17th October 2016
Daawo Sawirro: Ciidamada Booliska Saldhiga Howl-wadaag oo gacantaa ku dhigay Rag hubeysan oo Dhac u geysanaayay dadka Shacabka ah
Tifaftiraha K24 19th June 2016